Apple Mivarotra Modely Apple TV 4K nohavaozina ankehitriny [havaozina] | Avy amin'ny mac aho
Rehefa avy nanampy fitaovana hafa amidin'ny orinasa Amerikana Avaratra, Apple dia mivarotra modely Apple TV 4K nohavaozina sambany hatramin'ny namoahana ity vokatra ity. Amin'izao fotoana izao, any Etazonia ihany io "resale" io, fa azo inoana fa mety hanolotra tombony mitovy amin'izany ireo firenena Vondrona Eropeana.
Tsarovy fa ny Apple TV 4K dia natomboka teny an-tsena ny volana septambra 2017 lasa teo, ary 4 volana monja aty aoriana dia apetrak'i Apple amin'ny vidiny mora lavitra kokoa ireo maodely voaverina.
Araka ny fantatsika, ity fitaovana ity dia misy amin'ny configurations samihafa. Ny maodely 32GB sy 64GB dia misy eo amin'ny $ 149 sy $ 169 eo ho eo, tsirairay avy, taratry ny fitehirizana vola mitentina 30 $ eo ho eo amin'ny vidin'ny nomen'ireto fitaovana ireto eo amin'ny tsena amerikana.
Ireo karazana fitaovana ireo dia tsy hitovizany amin'ny mpiara-mianatra aminy, satria i Apple dia mijery tsara ireo vokatra nohavaozina, fitsapana, manadio ary mamerina azy ireo toy ny hoe vokatra vaovao izy ireo. Ho fanampin'izany, manome toky mitovy amin'ny modely vao navotsotra izy ireo, 1 taona manomboka amin'ny fandefasana ilay fitaovana, afaka maharitra 3 taona raha nifanaraka tamin'ny Apple Care ianao.
Ireo tombony ireo dia araraotin'ny mpanjifa marika, izay mahita azy io ho toy ny vokatra mitovy amin'ny tany am-boalohany, ary efa misy vahaolana kely efa voavaha. amidy eny an-tsena volana vitsivitsy aorian'ny famotsorana azy amin'ny vidiny ambany.
Apple dia nanao izany tamin'ny maodelim-iPhone sasany, ary koa iPads, ao anatin'izany ny iPad Pro 12.9-inch vaovao, natolotra tamin'ny volana Janoary lasa teo. Ankehitriny dia anjaran'ny Apple TV 4K.
Hihaino tsara isika raha manomboka izany manolora an'io karazana fotoana io any amin'ny firenen-kafa miaraka amin'ny fisian'ny marika, izay ahafahan'i Eropa misimisy kokoa, na dia tsy fantatsika aza hoe hahatratra an'i Espana izany.
Ny singa sasany dia efa misy ao amin'ny Tranonkala espaniola an'ny Apple.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Apple dia mivarotra maodely Apple TV 4K nohavaozina [havaozina]